कोरोनाभाइरसलाई कसरी हतियार बनाउँदैछन् ह्याकरहरुले ? - Parichay Network
कोरोनाभाइरसलाई कसरी हतियार बनाउँदैछन् ह्याकरहरुले ?
परिचय नेटवर्क द्वारा	 ३ चैत्र २०७६, सोमबार १०:५२ मा प्रकाशित
विश्व कोरोना भाईरसको संक्रमणका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका बेला साईबर अपराधीहरु भने यसैलाई हतियार बनाएर व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुका गोप्य खातासम्म पुग्ने अपराधमा संलग्न रहेको बिबिसिले खुलासा गरेको छ ।
प्रूफप्वाइन्टका अनुसार इमेल पाएका जिज्ञासु मानिसहरू त्यसमा क्लिक गरेपछि सामान्य र विश्वसनीय लाग्ने डक्युसाइन ९म्यअगकष्नल० पृष्ठमा पुगे। तर त्यो खासमा अपराधीहरूले लग-इन विवरण पत्ता लगाउन बनाएको एउटा छद्म वेबपेज हो।
धेरैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नाम दुरुपयोग गरेका छन् । कोरोनाभाइरसको प्रकोप आरम्भ भएयता नै ह्याकरहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) को रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर यो चाहिँ एकदमै दुष्ट खालको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो डाउनलोड गर्ने मानिसले कुनै उपयोगी कुरा पाउँदैनन्। बरु उनीहरूका कम्प्युटर एजेन्टटेस्ला कीलगर नामक हानिकारक भाइरसबाट सङ्क्रमित हुन्छन्।
प्रूफप्वाइन्ट भन्छस् एकचोटि त्यसलाई इन्स्टल गरेपछि तपाईँले कीबोर्डमा थिचेका प्रत्येक कुराको विवरण ह्याकरहरूसम्म पुग्छ। त्यसबाट उनीहरूले अन्लाइन ब्याकिङ र वित्तीय खाताहरूमा पहुँच कायम गर्न सक्छन्।
ह्याकरहरूले कर फिर्ता हुने प्रलोभन दिँदै इमेल पठाउने गरेका छन् । यसले ब्रिटिश कर निकाय हर मजेस्टिज रेभेन्यू एन्ड कस्टम्सको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर ब्रिटेनका प्रयोगकर्ताहरूलाई तारो बनाइरहेको छ।
माईम्कास्टस्थित ई-अपराधसम्बन्धी प्रमुख कार्ल वीअर्न भन्छन्ः ‘इमेलमार्फत् पैसासम्बन्धी गरिने कुनै त्यस्तो प्रकारको सञ्चारप्रति प्रतिक्रिया नजनाउनुहोस् र निश्चित रूपमा सम्बन्धित कुनै पनि सन्देशमा क्लिक नगर्नुहोस्। एचएमआरसीले सम्भावित कर फिर्ताबारे यस प्रकारको सुझाव दिँदैन।’
ह्याकरले व्यक्तिगत विवरण चोर्न अनेक उपाय प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्ता इमेल आँखालाई तान्ने खालका मात्र छैनन् बरु त्रास बढाउने खालका पनि छन् ।
सीडीसीले बिटकोइनबाट चन्दा मागेको छैन । डब्ल्यूएचओको जस्तै सीडीसीको नामको पनि विभिन्न ठूला फिशिङ प्रकरणमा दुरुप्रयोग भएको छ।
जेसुकै लेखिएको भए पनि इमेल विश्वसनीय लाग्ने खालको छ। ह्याकरहरूले सीडीसीको नक्कली वेबसाइट पनि बनाएका छन्।
क्यास्पर्स्कीका अनुसार उसको एन्टी-भाइरस सफ्टवेअरले ‘कोरोनाभाइरस’ नाम नदिएको हानिकारक कम्प्युटर भाइरस ३,००० भन्दा बढी पटक फेला पारेको छ।